Tababarihii Xulka kubadda cagta Soomaaliya oo xilkii laga qaaday – Radio Daljir
Juunyo 16, 2021 2:41 g 0
Tababaraha kubadda cagta ee Soomaliya Salif Abdulladiif oo dhawaan heshiis u saxiixay xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya si uu u leeliyo xulka qaranka Soomaaliya ayaa shaqadii laga eryay.
Tababarahan u dhashay dalka Morocco ayaa maalmihii u dambeeyay wajahayay cadaadis uga imanayay maamulka xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya.
Ilaa iyo hadda lama oga sababta shaqada looga joojiyay tababaraha,hase yeeshee wararka qaar ayaa sheegaya in tababaraha lagu eedeeyay anshax darro.
Xulka Soomaaliya oo haatan ku sugan dalka Djibouti ayaa u diyaar garoobaya tartanka FIFA Arab Cup ee lagu qaban doono dalka Qadar iyagoo 20-ka bishan June la cayaari doona dalka Cumaan, waxaana xulka Soomaaliya u safan doona cayaartooy u badan gurba-joog.
Saraakil ka tirsan AMISOM oo gaaray Garbahaarey